Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya oo u baratay inay been aan jirin dunida maqashiiso iyo HAD/ONLF oo runta ka sheegay
Itobiya oo u baratay inay been aan jirin dunida maqashiiso iyo HAD/ONLF oo runta ka sheegay
Hogaanka Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) oo ku tilmaamay been la soo dhoodhoobay bayaankii ay Khaarijiyada Itobiya kaga jaawbtay warbixintii HRW.
Hogaanka Arimaha Dibadda ee Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa soo saaray qoraal faah faahsan oo ay kaga waramayaan been farabadan oo ku xusnaa qoraal kasoo baxay wasaarada Arrimaha Dibada Ethiopia. Qoraalka ay soo saareen taliska Itobiya ayay ku sheegeen inaysan waxba kajirin warbixinta Haya’dda Xuquuqul Insaanka ee (HRW) ay ka soo saartey arimaha Itobiya ee loogu magac daray “Why are Ethiopian eyes on Brussels?” oo soo baxay 19kii July, 2011.
Hadaba Hogaanka Arimaha Dibadda ee Jabhada ONLF ayaa si kulul u canbaareeyay warbixinta ay soo qoreen Taliska Itobiya oy kaga jawaabayeen warbixintii HRW oo cadeysay inaysan Itobiya ogoleyn in Haayadaha Madaxa banaan ay si xor ah uga soo waramaan Ogadeniya ama shaqo ka qabtaan.
Qoraalka uu soo saaray HAD ee jabhadda wuxuu ka xog waramay sidii Haayada Laanqayrta Cas (ICRC) looga soo ceydhiyay wadanka iyada oo Males Zenawi uu u sheegay madaxa Laanqayrta Cas inaysan waligood oo danbe ka shaqeyn doonin Dhulka Ogadeniya loona ogoleyn inay galaan, taasoo uu si cadaan ah ugu sheegay Meles Zinawi madaxa haya’adda ICRC markuu kula kulmay Addisababa. Sidoo kale warbixinta Hogaanka Arimaha Dibadda ayaa ka hadashay haya’daha kale ee faraha badnaa ee lagasoo saaray wadanka Sida MSF.
Wuxuu Hogaanka ku su’aalay warbixintiisa; “Hadii Human Rights Watch ay ka xaglinayso Itobiya maxay ugu oggolaan wayday haya’daha dhex dhexaadka ah ee Laanqayrta Cas (ICRC) iyo Dhakhaatiirta aan Xuduuda Lahayn (MSF).” Sidoo kale; “Hadii Ogadenya uusan ka jirin dhibaato maxay u qarinayaan oo haya’daha iyo saxaafadda caalamka looga horjoogsaday inay galaan Ogadenya.”
Taliska Ethiopia wuxuu caddeystay inuu yahay talis gumeysi ah oo macangag ah uuna u dhaqmayaa sida lagu yaqaano talisyada kaligood taliyaasha ee gumeysiga ah, kuwaas oo wax kasta oo run ah oo laga sheego isku daya inay ka daggalamaan iskuna dayaan inay caalamka ku jaha-wareeriyaan warar been ah oon jirin.
Qoraalka Hogaanka Arimaha Dibadda JWXO Soo saaray ayaa waxaa lagu cadeeyay in Itobiya kadib markii ay aragtay awooda aan la maquunin karin ee Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya oo shacabka Ogadenya ay ka gadmi weydayheshiis beenaadkii ay sheegayeen inay wadan sadexaad ka codsadeen si loo wada hadal siiyo Ururka ONLF iyo Taliska Ethiopia. Jabhada ONLF iyadoo ogsoon durbaanka beenta ah ee Itobiya ayay hadana ogolaatay inuu wada hadal la galo Gumeysiga maadaama shuruudihii ku xidhnaa wada hadalka ONLF loo maro ay soo mareen.
Warbixinta HAD waxaa lagu sheegay inuusan waxba ka jirin oo isbeen abuur yahay wada hadal inuu u socdo Itobiya iyo ONLF arintasoo aan waxba ka jirin, ujeedo kale oo jahawareerin ahna ay ka leedahay Itobiya. Hogaanka Arimaha Dibadda wuxuu cadeeyay in wax wadahadal ah uusan dhex marin ilaa hadda Itobiya iyo JWXO. Isbeen abuurka taliska Itobiya ayaa waxa uu tilmaam u yahay inaysan diyaar u aheyn in wadahadal dhab ah xal lagaga gaadho qadiayda Ogadeniya, oo waxa ay doonayso Itobiya uu yahay un dacaayad ay caalamka la dhex socoto.
Ugu damabyntii wuxuu ku soo gunaanaday HAD in shacabka Ogadeniya illaa xoriyadiisa aayo-ka-tashi uu ka gaadhayo inuu soconayo halganka ONLF. Waxayna ONLF hadiyo jeer soo dhaweynaysaa waxii waan waan ah ee qadiyada Ogadeniya lagu gaadhsiin karo xal nabadeed oo u horseeda inay Aayahooda ka tashadaan.
Hoos ka boggo qoraalka Jabhad soo saartay oo dhameys Tiran:
Warsaxaafadeed Xafiiska Arrimaha Dibada ONLF Soo Saaray